Zụta Norethisterone acetate ntụ ntụ (51-98-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / Norethisterone acetate ntụ ntụ (51-98-9)
Rating: SKU: 51-98-9. Category: Ihe nkuzi
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke Norethisterone acetate Powder (51-98-9), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa akara mma.
Vidiyo na Norethisterone acetate ntụ ntụ (51-98-9)
Norethisterone acetate ntụ ntụ (51-98-9) Specification:
Ngwurugwu Chemical: Product Name: Norethisterone acetate (NETA)
Cas Mba: 51-98-9
molekụla Formula: C22H28O3
molekụla arọ: 340.46
nchekwa: Chekwaa na 2-8 Celsius.
Norethisterone acetate ntụ ntụ (51-98-9) Daha:
Norethindrone Acetate, USP (17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate), progestin sịntetik, ọnụ na-arụ ọrụ, bụ acetic acid ester nke norethindrone. Ọ bụ ihe na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha, na-acha ure mmiri.
Norethisterone acetate (NETA), nke a makwaara dị ka norethindrone acetate ma rere ya n'okpuru aha ika Primolut-Nor n’etiti ndị ọzọ, bụ ọgwụ progestin. A na-eji ọgwụ a agwọ ọrịa endometriosis, ọbara ọgbụgba na uterine nke ọkwa hormone na-adịghị ahụkebe, na amenorrhea nke abụọ. Amenorrhea nke abụọ bụ mgbe nwanyị kwụsịrị ịhụ nsọ n'ihi oke nke ụfọdụ homonụ nwanyị.
Norethindrone bụ ụdị nwanyi homonụ (progestin). Ọ dịka homonụ progesterone nke ahụ gị na-eme dị ka eke. Ọgwụ a na-arụ ọrụ site na ịkwụsị uto uto akpanwa n'oge nsọ nsọ na igosi akara mgbanwe nke homonụ n’ime akpanwa iji weghachite oge obia.
"[email protected]: FDA Kwadoo Products Products ”. Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na United States. Weghachite 6 Disemba 2016.
James M. Rippe (15 Maachị 2013). Ogwu ndu. CRC Press. p. 280-. ISBN 978-1-4398-4544-8.
Gibian H, Kopp R, Kramer M, Neumann F, Richter H (1968) Nkeji edemede "Mmetụta nke ngwugwu na ndu ndu nke norethisterone acetate". Acta Physiol Lat Am. 18 (4): 323–6. PMID 5753386.